Isikripthi semveli seapile senza ukuba abasebenzisi be-iphone baphinde babuye kulo nyaka
Eyona Iindaba Kunye Nohlolo Isikrweqe esiqhelekileyo se-Apple senza abasebenzisi be-iPhone emva kwexesha kwakhona kulo nyaka
Isikrweqe esiqhelekileyo se-Apple senza abasebenzisi be-iPhone emva kwexesha kwakhona kulo nyaka
Nako sisiya kwakhona. Ngale ntsasa ngeye-2 kusasa, ixesha lokonga iMini (DST) ibuyele kuninzi lwe-U.S. Oko kuthetha ukuba iwotshi zihanjiswe phambili iyure ziyivumela ukuba ihlale ngaphandle ngaphandle kwemini. Ikwathetha ukuba kwakhona, abasebenzisi be-Apple iPhone baya kufika emva kwexesha nakuphi na ukuqeshwa abanokuthi bakucwangcisele namhlanje. Ngelixa uninzi lwezixhobo (ezinje ngeethelevishini, iikhompyuter, ii-smartwatches kunye neefowuni ze-Android) zilungelelanisa ngokuzenzekelayo notshintsho lwexesha, ngenxa yesizathu esithile sele isisithethe se-iPhone kunye ne-iOS ukuyicofa .
Ewe, i-iPhone kufuneka ilungelelanise ixesha ngokuzenzekelayo. Kodwa ngale ntsasa, umnini we-iPhone osete ialam yakhe ngo-7: 30 kusasa uphantse walala ngenxa yokuba i-iPhone yakhe khange ilungelelanise iwotshi ye-DST. Oku kube ngamava wabanini be-iPhone namhlanje. Ewe, ewe, kunokuba kubi ngakumbi. Emuva ngo-2012 iwotshi kwizixhobo ze-iOS batyhalelwa emva iyure endaweni yokuqhubela phambili iyure , ezinokuthi zenze abanye abasebenzisi be-iOS ukuya kuthi ga kwiiyure ezimbini emva kwexesha. Kwakuloo nyaka mnye, xa abasebenzisi be-iPhone babuza uSiri ukuba ixesha lokonga iMini lalicwangciselwe ukuqala nini, umncedisi ophendulayo waphendula ngomhla ongalunganga.
Kukho isisombululo esilula kubasebenzisi be-iOS abafuna ukuvuka ngexesha elithile ngomhla apho i-DST iqala okanye iphela. Cwangcisa ii-alam ezimbini, enye ucinga ukuba i-iPhone iyakutshintsha iwotshi ngokuzenzekelayo, kwaye enye icinge ukuba ayizukuphumelela. Ukuba i-iPhone yakho okanye i-iPad ayilungelelanisanga notshintsho lwexesha, unokuseta iwotshi ngesandla. Kwi-iOS 12 yiya kuUseto>ngokubanzi>Umhla & Ixesha. Cofa ku Cwangcisa ngokuzenzekelayo ukuze ucime ukucima. Chwetheza ixesha elichanekileyo okanye uskrole ukukhetha ixesha elichanekileyo.
Njengoko besesitshilo, abasebenzisi be-Android akufuneki bakhathazeke ngotshintsho lwexesha. Ngokubhekisele kubasebenzisi be-iOS, nje ukuba bahlengahlengise iiwotshi zabo ngesandla baya kulunga kude kube yi-2 ngeCawa, nge-3 kaNovemba. Kulapho i-DST ifikelela esiphelweni ngo-2019.
I-iphone x vs inqaku le-8
i-galaxy s20 ibhonasi yangaphambi koku-odola
Uvavanyo lwethu lobomi bebhetri lwe-Samsung Galaxy S6 lubonisa ukunyamezela okufanelekileyo
Uhlaziyo lwe-Apple & apos; s iOS 13.6.1 luphumile kwaye lususa umbala oluhlaza kwiscreen
I-V-MODA Crossfade 2 engenazingcingo iyahlaziywa ngeCodex Edition entsha
ICloud Keychain: yintoni kunye nendlela yokuyisebenzisa kwi-iPhone okanye kwi-iPad
Intengiso entsha ye-Apple iPhone yeHilari ityhila uhlobo lolwazi olugcinwa sisixhobo
Unabantwana? Nazi iiapos zokwenza ukuvimba ukuthengwa kwangaphakathi nohlelo kwi-Android, i-iOS kunye neFowuni yeWindows
Iifowuni zekhamera ezigqwesileyo ze-2021
Umahluko phakathi koPhuculo lwe-Iterative kunye neNkqubela kwi-Agile